Vanogovanisa mvura → Zvivakwa zveveruzhinji • Mahofisi • Anhandare yendege • Mabhenji • Hofisi
Iwe unoda here mvura inogovera munzvimbo dzeveruzhinji, hofisi, nhandare, bhanga? Iyo kambani yeWater Point inopa dzisiri-cylinder mvura dzinogadzira mvura, vanonwa doro, iko kunobva vatungamiriri venyika muindasitiri, yatagovera ndega muPoland.
Chimwe chezvinhu zvakakosha mumuviri wemunhu mvura. Yakafanira hydration yemuviri uye kugutsikana kweye nyota kune hutano hwakanaka pane hutano uye zvese hupenyu hupenyu hunoitika mumuviri wedu.
Iko kudikanwa kwemvura kunowedzera kunyanya muzhizha, patinonzwa zvakanyanya nyota panguva yekupisa. Naizvozvo, mhinduro yakanaka itsime, zvitubu uye mvura yekumwa zvinogadzirwa izvo zviri kuwanikwa kakawanda munzvimbo dzeveruzhinji.
Midziyo iyi inopa mvura yakachena uye ine hutano. Nekuda kwemafuti akaiswa mavari, munhu wese anogona kumwa mvura nyoro uye inonaka kana kuzadza bhodhoro ravo kana bhodhoro remvura naro. Mazuva ano emvura yekunwa magetsi yakagadzirwa nenzira yekuti kwete vakuru chete nevana, asiwo vakweguru vanogona kuishandisa nyore.
Kunwa zvitubu zvemvura zvinopa mvura inosangana nezvinodiwa zvese, saka zvakachengeteka kunwa uyezvezve, zvinonaka kwazvo.
Idzi mvura inonwa vanogadzirisa inogona kuiswa munzvimbo dzeveruzhinji, nzvimbo dzekutengesa, nhandare, mapaki nenzvimbo dzemitambo, pamwe nemakambani, zvikoro uye zvipatara.
Midziyo iyi inoita kuti vanhu vari munzvimbo idzi vanzwe kugadzikana uye vanogona kuchengeta hutano hwavo nekumwa yakachena uye yakachena mvura.
Matsime emvura ekunwa saka anofanirwa kuwanikwa pese patinoshandisa nguva yakawanda, uye hatigone kuwana mukana wekutenga mvura yakachena kana chimwe chinwiwa. Kunwa mvura vanogovera haingori tsime chete remvura nyowani uye inonaka, asi zvakare, nekuda kwekugadzirwa kwavo kwese neazvino, chiri chimwe chinhu chinowedzera kushongedza kwenzvimbo dzeruzhinji.
Kunwa nzvimbo dzemvura kunokwanisa kupa mvura zvakanaka, apo kuchideredza kuwanikwa kwemvura uye kugovera mutengo, uye kunopa gakava rezvemamiriro ekunze nekudzora zvakanyanya kushandiswa kwemabhodhoro epurasitiki uye kuderedza marara.
Kunwa mvura inogovera uye zvese zvitubu zvinobatsira kusimudzira mararamiro ane hutano nekugadzira tsika yekumwa yakachena mvura yakasviba pane zvinwiwa zvinotapira.
Kupa huwandu husina magumo emakristani-akajeka mvura, inowanikwa munzvimbo yega yega yeruzhinji kutenderera nguva, inowedzera pro-hutano maitiro uye pro-ecological kuziva kwenharaunda, uye zvakanyanya kuderedza mutengo unobatanidzwa nekubviswa kwezvakawanda zvakakura marara muguta.
Kunwa matsime emvura, zvitubu nezvitubu zvakare kunochengetedza nguva, nzvimbo nemari zvakamboshandiswa mari yekuchengetera mvura yemumabhodhoro.
Vanonwa mvura vanogadzirisa vanogadzirwa neazvino zvigadzirwa, kuve nechokwadi chekureba kwenguva refu uye yakaderera mashandiro ekushandisa.
Iko kurongeka kwakakodzera kwechishandiso kunoita kuti mvura inopihwa yemhando yepamusoro, nyowani uye inonaka kuravira, uye ndeyechokwadi hutachiona hwakachengeteka.
non-cylinder mvura inogadzira mvurayakachena pombi mvurakuendesa mvura kuairportmvura inogovera kubhengimvura inogovera hofisimudziyo wemvura mumahofisikunwa mvura magetsi eposvomatsime emvura mvurakabhoni mvuramvura inopisakubva paipimvura yemahofisimvura panhandaremvura muhofisiutano mvura pombimvura inotonhorachitubu mvura yezvivakwa neveruzhinji